यातायातमा कमजोर लगानीः चीनबाट नसिके भुटानबाट सिकौं !  OnlineKhabar
यातायातमा कमजोर लगानीः चीनबाट नसिके भुटानबाट सिकौं !
नेपालमा ५२ हजार किलोमिटर मात्रै सडक सञ्जाल छ
छिमेकी मुलुक चीनले विकासमा ठूलो छलाङ मारेर युरोप र अमेरीकालाई चुनौति दिएको छ । विश्वभर चीनले उत्पादन गरेका सामानहरु आयात हुने गर्छन् । आखिर यत्रो विकास कसरी सम्भव भयो त ? हामी किन पछि पर्‍यौं ?
देश विकासमा सडक सञ्जाल विस्तारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यातायात क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानीका कारण अहिले कैयन देशहरुको द्रुत गतिमा आर्थिक वृद्धि भएको छ ।
तर, आर्थिक रुपमा रुपमा सबल हुन भने सडक सञ्जाल बिस्तार मात्रै अचुक उपाय भने होइन । साथसाथै देशमा राजनीतिक स्थायित्व र उद्योगधन्दाको विकास पनि हुन जरुरी छ ।
अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनका लागि यातायात क्षेत्रको बिकास महत्वपूर्ण हुन्छ । विश्वमा ठूलो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरु हुन् या आर्थिक रुपमा फड्को मारेका राष्ट्र, ती सबैको इतिहास खोतल्ने हो भने यातायात क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको देखिन्छ । तर, हाम्रो देशमा भने यातायात क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ठूलो लगानी नै हुन सकेको छैन । जसका कारण नै देशले आर्थिक रुपमो फड्को मार्न नसकेको हो ।
चमत्कारिक विकासका लागि चमत्कारिक लगानी
छिमेकी राष्ट्रको बिकास चमत्कारिक छ । तर, यो चमत्कारिक विकासको कारण भने यातायात क्षेत्रमा चामत्कारिक रुपमा गरेको लगानी नै हो । चीनले सन् २००९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९ प्रतिशतसम्म लगानी गरेको देखिन्छ । अहिले पनि यसको यातायात क्षेत्रमा भएको लगानी उत्साहजनक अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७ प्रतिशत देखिन्छ ।
हामीले अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी गरिरहेका छौं । चीनले आर्थिक रुपमा फड्को मार्नका लागि ९ प्रतिशत लगानी गरेको थियो, जुन हाम्रो तुलनामा ३ गुणा बढी हो । दिगो बिकासका लागि यातायात क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानी ठूलो मात्रामा बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रा विगतका २० वर्षहरु नियाल्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै यातायात क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ । गत वर्षदेखि भने यो करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । तर, यो अझै कम छ । किनकि हाम्रोजस्तो देशले यातायात क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी गनुपर्ने देखिन्छ ।
७५ प्रतिशत समथर भूभाग भएको भारत र हाम्रो प्राथमिकता उस्तै
हाम्रो देशको कुल भूभाग मध्ये ८३ प्रतिशत पहाडी भुभागले समेटेको छ । यहाँ समथर भनेको १७ प्रतिशत मात्रै हो । समथर भागको तुलनामा पहाडी भुभागमा सडक निर्माण गर्न दोब्बर भन्दा बढी खर्च लाग्छ । तर, हामीले ७५ प्रतिशत समथर क्षेत्र रहेको भारतकै तुलनामा अहिले यतायात क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छांै । भारतले अहिले पनि कुल गार्हथ उत्पादनको ३ प्रतिशतकै हाराहारीमा लगानी गरिरहेको छ ।
भुटानको यातायातमा बर्षेनी ५.५ प्रतिशत लगानी
हाम्रो भौगोलिक स्वरुप भूटानसँग मिल्छ जसले बर्षेनी कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ देखि ६ प्रतिशतसम्म यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्छ । जसका कारण नै अहिले यो देशको आर्थिक बृद्धि ७ प्रतिशतका हाराहारीमा छ । विकासमा धेरै अघि बढेको भुटानबाटै पनि हामीले सिक्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अर्काे, दक्षिण कोरिया जसले पनि विकासमा ठूलो फड्को मारिसक्यो । साथै अर्थतन्त्रमा पनि यो मजबुत बन्दै गएको छ । दक्षिण कोरियाले यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको छ । विगतमा कोरियाले यातायात विकासमा फड्को मार्न औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको थियो ।
युरोपुली मुलकमा मर्मतमै १ प्रतिशत लगानी
युरोपेली मुलुकहरुले सडक निर्माण तथा विस्तारका काम सकिसकेका छन् । त्यसैले उनीहरुले अहिले यातायात क्षेत्रमा गरेको लगानी सानो देखिन्छ । उनीहरुले अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी गरेका छन् ।
यातायात क्षेत्रमा अधिकांश विकासका काम सम्पन्न भइसकेका कारण उनीहरुले छुट्याएको लगानी भनेको मर्मत तथा सम्भारका लागि मात्रै हो । तर, हाम्रो प्राथमिकता अहिले युरोपियन मुलुकहरुले मर्मत तथा सम्भारका लागि छुट्टाएको बराबर जस्तै छ ।
विश्व अर्थतन्त्रलाई नियाल्दा यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेपश्चात नै कैयन मुुलुकहरुले आर्थिक रुपमा फड्को मारेका छन् । तर, यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्दैमा मात्रै पनि मुलुक समृद्ध हुने होइन, सर्वप्रथमत आर्थिक समृद्धिका लागि देशमा चाहिने भनेको राजनीतिक स्थिरता हो ।
अहिले हाम्रो देश द्वन्द्वबाट बाहिर आएको छ । देश द्वन्द्वबाटै बाहिर आएसँगै पछिल्लो समयमा विकासका कामहरु अघि बढेका छन् । तर, पनि यातायात क्षेत्रमा जुन मात्रामा लगानी हुनु पर्दथ्यो, त्यो मात्रामा हुन सकेको छैन ।
नेपालमा अहिले यातायात क्षेत्रमा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा भएको लगानीलाई बढाएर अब ५ प्रतिशतभन्दा माथि लानुपर्दछ, यो वर्ष हामीले ७९ अर्ब ७२ अर्ब बजेट यतायातको क्षेत्रका लागि छुट्टाएका छौं तर, यो कम्तिमा पनि १ खर्ब २० अर्बको हाराहारीमा हुन पर्दथ्यो
अब हामीले कति लगानी गर्न उचित ?
छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा हाम्रो विकास निकै पछि परेको छ । दक्षिण एसियामै रहेको सानो राष्ट्र भुटानले आफ्ना आर्थिक सूचक मजबुत बनाएको छ त्यसको एउटै कारण छ यातायात क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानी ।
यातायात क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल आजको भोलि नै देखिने होइन यसका लागि केही समय कुर्नपर्छ । तर, अब हामीले भने यातायात क्षेत्रमा लगानी नबढाई कुनै उपाय नै छैन ।
नेपालमा अहिले यातायात क्षेत्रमा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा भएको लगानीलाई बढाएर अब ५ प्रतिशतभन्दा माथि लानुपर्दछ । यो वर्ष हामीले ७९ अर्ब ७२ अर्ब बजेट यतायातको क्षेत्रका लागि छुट्टाएका छौं । तर, यो कम्तिमा पनि १ खर्ब २० अर्बको हाराहारीमा हुन पर्दथ्यो ।
अहिले नेपालमा हामीसँग ५२ हजार किलोमिटर मात्रै सडक सञ्जाल छ । तर, नेपालमा मेरो आँकलनमा १ लाख २० हजार किलोमिटर सडक आवश्यक छ । यसरी हेर्दा अझै आधाजसो सडक निर्माण गर्नै बाँकी छ ।
देशमा अहिले राजनीतिक स्थिरता देखिएको छ, त्यसैले अब दिगो विकासका लागि हाम्रो प्राथमिकतामा सडक तथा यातायात पर्नुपर्दछ ।
(भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीसँग सुदिल पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
२०७३ फागुन ५ गते २०:१८ मा प्रकाशित
roshan लेख्नुहुन्छ | २०७३ फागुन ५ गते १५:२७
Budget matrai xuttyera hudaina sir. Corruption pani control garnu parxa. Thekdar pratha ko antya garnuparxa.
krishna लेख्नुहुन्छ | २०७३ फागुन ५ गते १६:१७
बिनियोजित बजेट त खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थप बजेट बढाउनुको अर्थ रहदैन। त्यस माथि सडक निर्माण तथा मर्मत कार्य आर्थिक बर्षको अन्तमा मात्र हुनुलाई राम्रो मानिदैन । यसको सुधारको लक्ष्यण देखिनु पर्दछ । तव मात्र लगानि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
Pahadi Bolchha लेख्नुहुन्छ | २०७३ फागुन ५ गते १९:२६
Yo nasalbhedi manosthiti ra soch ko pratifal ho.. Ab pani tehi soch jari bhaye.. desh arko thulo dwandwa ma faschha…
DHRUBA RAJ KARKI लेख्नुहुन्छ | २०७३ फागुन ६ गते ९:४०
अवस्य पनि हामीले यातायात क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिइ अव सुखै छन । विकासको प्रमुख मेरुदण्डको रुपमा रहेको सडकको विस्तार स्तरोन्नती र मर्मतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राष्टिय वजेटको निश्चित अंश छुट्याइनु पर्दछ । यसका लागी हामी सवैले सरकारलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
criketor लेख्नुहुन्छ | २०७३ फागुन ६ गते १५:२६
विकासमा धेरै अघि बढेको भुटानबाटै पनि हामीले सिक्नुपर्ने बेला आएको छ ।
Bhutan ko bikas bhayeko bhaneko kunai thulo company ma bhada majhne keti hakim ko najar ma parere achanak mahongo gahana lagayer santro hankere hide jasto ho.
Nepal ra Bhutan ko tulana nagarau.
Rambijul Mandal लेख्नुहुन्छ | २०७३ फागुन ६ गते १७:२१
Sab vanda lekhak pani des ko abastha bare anyol ma xa, jab Sam sasak barg le aafno mansikata ma paribartan gardai na, bajet badhayer kehi hunebala xai na,pahadma sadak banauda 1km= tarai ma 16km sadak ban xa